adeegaya 45 | Bisposimplicio's Blog
← SERVICE 45
משרת 45 →
Source: Scroll of Yehoshu “Messiah
Subject: macnaha ku jiraa dadka SIN
Reading: Ya’acov 2: 1-26
Walaalahayow, waxaad oon rumeyn Rabbiga ammaanta Yehoshu ‘Masiix, si ixtiraam leh ee people.2 Waayo, haddii nin kaatun dahab ah iyo dhar ganaax yidhi shirkiinna, oo uu u yimaado nin kale oo miskiin ah ee dharka sordid, 3 Oo waxaad kala eexataan waxa la dhar wanaagsan, oo waxaad ku tidhaahdaan, adigu kaalay oo halkan fadhiiso, meel wanaagsan iyo tidhaahdaan ka miskiinka ah: waxaa halkaas ka taagan, ama halkan cagahayga ag fadhiiso, 4 laakiin idinku ma aydnaan, laga yaabee dadka beel beel ka mid ah Naftiinna, hana noqon garsoorayaasha fikirrada sharka leh? 5 I dhegaysta, walaalahayga aan jeclahayow. Ma Y’HWH Ilaah weligeed ah u doorteen dadka saboolka ah ee dunida inay ahaadaan kuwa hodan ku ah rumaysadka oo dhaxalsiiyey boqortooyadii wuxuu u yaboohay kuwa isaga jecel? 6 Laakiin idinku waad maamuus masaakiinta. Ma miyaanay idin dulmin oo hodan, oo miyaanay idiin jiidin maxkamadda? 7 Ha ay caayin magaca wanaagsan ay ka laydiinku yeedhay? 8 Haddii aad dhab ahaantii sharciga boqornimada hayn sida ay Tawreed, Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada, si wanaagsan baad yeeli. 9 Laakiin haddii aad kala eexataan waad dembaabtaan, oo lagu helay by Tawreed sida transgressores.10 Ku alla kii sharciga oo dhan xajiya, oo weli u xumayn in hal dhibic ayaa waxaa uu ku eedaysan yahay ee todos.11 Waayo, kii yidhi Waa inaanad sinaysan, ayaa sidoo kale ku yidhaahdeen, Wax ma matarás.Ora haddii adigu sinaysataa jirin, laakiin aad dad disho, waxaad noqotay mid xad gudbay oo Tawreed ah. 12 Sidaas daraaddeed waxaad la hadli, oo saas yeel, sida ay tahay in lagu xukumi doono sharciga xorriyadda. 13 Waayo, isagu wuxuu yeelan doonaa Xukunku naxariis leh kii aan dadka tusay innaba naxariis ma leh; Naxariis quruxda xukunka. 14 muxuu u taraysaa walaalahayow, haddii qof uu sheegay in uu Wanaag isagoo Mu’min ah laakiin ma laha shuqullada? Rumaysadku ma badbaadin karaa isaga? 15 walaalkiis ama walaashiis Haddii yahay qaawan oo oo cuntadii maalinta, 16 ka mid ah in aad waxaad iyaga ku tidhaahdaa, nabad ha ku tago; aad iyo Iiddii aquentai kor saarnaa; hana ku siin waxyaabaha looga baahan yahay jirka, maxay tartaa? 17 Haddaba sidaas oo kale rumaysadku haddaanu waxba kama shuqullada keli ahaantiisu waa meyd. 18 Laakiin mid baa odhan doona: Adigu waxaad leedahay rumaysad, anna waxaan leeyahay shuqullo; rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn ii tuso, oo waxaan ku tusi doonaa iimaanka by my obras.19 Waad rumaysan tahay in Y’HWH ka mid yahay? Waad ku wanaagsan tahay; Shayaadiintuna waxay rumaysan yihiin, wayna gariiraan. 20 Laakiin waxaad ogaan maysid nin aan micne lahayn O, in rumaysadka aan shuqullada waa dhintay? 21 Ma waxa uu ahaa rumaysad kuma ay in aabbe noo ah Hamon xaq markii uu bixiyey wuxuu ina allabariga ku dul Yitzhak? 22 waxaad ku garanaysaa in rumaysadku shuqulladiisii la shaqeeyey, oo ay shuqullo Miyeydaan rumaysadku kaamil ku noqday; 23 iyo Tawreed waxaa rumoobay, kaas oo yidhi, Waxaa isaga la rumeysan yahay in aabbuhu Y’HWH Hamon, oo waxaa la isaga loogu tiriyey xaqnimo, oo waxaa loo bixiyey saaxiib la ah weligeed ah. 24 Waxaad garanaysaan in nin shuqullo xaq yahay oo aan lagu caddayn rumaysadka oo keliya. 25 Oo sidaas oo kalena dhillo Rachav ma shuqullo xaq ku noqday markii ay soo dhaweeyeen ee rasuullada ahaa, oo iyaga jid kale u dirtay? 26 Waayo, sida jidhkii aan ruux lahaynu meyd u yahay, sidaas oo kaluu rumaysadkii aan shuqullo waa dhintay.
Sida record Mattatyáhu, Mt.13: 55, sunagogga ku yaalla magaalada Naasareet ee Galili Yerroshu ‘ka jabay; dalka qadiimiga ah iyo bakhtiyeen reer binu Israa’iil oo ahaa midib takoor wax caadi ah; Yerroshaléym ee yerrudim ka hadlay Yerroshu ‘: “Waxaan arki Reer Samaariya baad tahay”; Nataana’el weydiiyay Philip, “Ma wax wanaagsan baa ka iman kara Naasaret?”
Hadda sida Col. 6: 7, kaas oo sheegay, in beera ninka uu u gooyaa, waxyaalahan ayaa qeyb ka natiijada naxdin leh ee reer binu Israa’iil.
Shirka of Yerroshu ‘oo noolaa qarnigii afraad ku dhacay jacayl la Boqortooyada Roomaanka backslid oo waxay u jeediyeen kaniisad Christian iyo sababta oo ah farcankii kun iyo lix boqol oo sannadood ku halligmeen cadaabta; way quudhsadeen Yerroshu “Messiah runta ah, bidayey in ilaah Yubiter mythological Greco-Roman Sooz iyo hadda loo yaqaan CIISE.
GOLAHA kiniisadda iyo raaca Wadaadada YEHOSHU ‘Masiixa ka NATIONAL